Iindaba - Ukupakisha ulwazi loLwazi: Qonda iiMpawu zePhepha, Phucula uMgangatho wokuPakisha nokuPrinta
Abstract: Iphepha zezona zinto zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ekuprinteni. Iimpawu zayo ezibonakalayo zinempembelelo ethe ngqo okanye engathanga ngqo kumgangatho wokuprinta. Ukuqonda ngokuchanekileyo kunye nokuqonda ubunjani bephepha, ngokweempawu zemveliso, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwephepha ukuphucula umgangatho weemveliso zokuprinta, kuya kudlala indima elungileyo ekukhuthazeni. Eli phepha lokwabelana ngeempawu zomxholo onxulumene nephepha, isalathiso sabahlobo:
Naluphi na uhlobo lwephepha eliprintiweyo elineepropathi ezithile, kuxhomekeke kwindlela yoshicilelo.
Iphepha elisetyenziselwa ngokukodwa ukuprinta. Ngokwendlela yokusetyenziswa kunokuhlulwa: kumaphepha eendaba, iincwadi kunye namaphepha, iphepha lokugubungela, iphepha lokhuseleko njalo njalo. Ngokweendlela ezahlukeneyo zokuprinta zinokwahlulwa zibe liphepha lokuprinta i-letterpress, iphepha lokuprinta i-gravure, iphepha lokuprinta i-offset njalo njalo.
Ibhekisa kubunzima bephepha kwiyunithi nganye, evezwe ngu-g / ㎡, oko kukuthi, ubunzima begram yephepha leemitha ezili-1. Inqanaba lobungakanani bephepha limisela iipropathi ezibonakalayo zephepha, ezinje ngamandla oqinileyo, isidanga sokukrazula, ukuqina, ukuqina kunye nobukhulu. Esi sesona sizathu siphambili sokuba umatshini wokushicilela ohamba ngesantya esiphezulu awulunganga kwiphepha lobungakanani elingaphantsi kwe-35g / ㎡, ukuze kube lula ukuvela iphepha elingaqhelekanga, ukuprintwa okungaphezulu kakhulu akuvumelekanga kunye nezinye izizathu. Ke ngoko, ngokweempawu zesixhobo, ulungiselelo lobungakanani beendawo zokuprinta ezihambelana nokusebenza kwazo zinokuveliswa, ukwenzela ukunciphisa ukusetyenziswa okungcono, ukuphucula umgangatho weemveliso kunye nokusebenza ngokushicilela kwezixhobo.
Ngaba ubukhulu bephepha, iyunithi yemilinganiselo ihlala ichazwa kwi-μm okanye mm. Ukutyeba kunye nobungakanani kunye nokuqina kunolwalamano olusondeleyo, ngokubanzi, ubukhulu bephepha bukhulu, ubukhulu bayo buhambelana ngokugqibeleleyo, kodwa ubudlelwane phakathi kwezi zimbini abukho ngokupheleleyo. Elinye iphepha, nangona libhityile, lilingana okanye lidlula ubukhulu. Oku kubonisa ukuba uxinizelelo lwesakhiwo sefayibha elichaza ubungakanani kunye nobukhulu bephepha. Ukusuka kwindawo yokujonga ukushicilela kunye nokupakisha umgangatho, ukulingana kwephepha kubaluleke kakhulu. Ngaphandle koko, iya kuchaphazela iphepha lokuhlaziya ngokuzenzekelayo, uxinzelelo lokushicilela kunye nomgangatho we-inki. Ukuba usebenzisa ubukhulu obahlukileyo beencwadi eziprintiweyo, uya kwenza ukuba incwadi egqityiweyo ivelise umahluko obalulekileyo wokuqina.
Ibhekisa kubunzima bephepha ngokweesentimitha ezi-cubic, elichazwe kwi-g / C㎡. Ukuxinana kwephepha kubalwa ngokobungakanani kunye nobukhulu ngokwale fomyula ilandelayo: D = G / D × 1000, apho: G imele ubungakanani bephepha; D bubukhulu bephepha. Ukuqina ngumlinganiso woxinano lwesakhiwo sephepha, ukuba siqinile kakhulu, iphepha elaphukileyo, ukuqhekeka kunye nokufunxwa kwe-inki kuya kuncitshiswa kakhulu, ukuprintwa akukho lula ukomisa, kwaye kulula ukuvelisa into enamathelayo emdaka. Ke ngoko, xa uprinta iphepha ngoxinizelelo oluphezulu, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kulawulo olufanelekileyo lwexabiso le-inki yokutyabeka, kunye nokukhetha ukoma kunye ne-inki ehambelana nayo.
Ngaba ukwenziwa kokumelana nephepha kwenye into yoxinzelelo, kodwa kunye nephepha lefayibha yokusebenza komzimba. Ukuqina kwephepha kusezantsi, kunokufumana uphawu olucacileyo. Inkqubo yoshicilelo lweeleterpress ngokubanzi ikulungele ngakumbi ukuprinta ngephepha elinobulukhuni obuphantsi, ukuze umgangatho wokushicilela we-inki ulungile, kwaye inqanaba lokumelana neepleyiti lokuprinta liphezulu.
Ibhekisa kwinqanaba lokungaphezulu kwephepha elingaphezulu, iyunithi ngemizuzwana, enokulinganiswa. Umgaqo wokufumanisa kukuba: phantsi komshini kunye noxinzelelo oluthile, umthamo othile womoya ngeglasi kunye nomgangatho wesampula phakathi kwexesha elithathiweyo. Iphepha eligudileyo kukuba, umoya ucotha kuwo, kwaye kungenjalo. Ukuprinta kufuna iphepha ngokugudana okumodareyitha, ukutyibilika okuphezulu, ichaphaza elincinci liya kuzala ngokuthembekileyo, kodwa upapasho olupheleleyo kufuneka luqwalasele ukuthintela ukubambelela ngasemva. Ukuba iphepha eligudileyo liphantsi, uxinzelelo lokushicilela olufunekayo lukhulu, ukusetyenziswa kweinki kukhulu kakhulu.
Kubhekiswa ekungcoleni kumphezulu wamachaphaza ephepha, umbala kunye nombala wephepha kukho umahluko ocacileyo. Idigri yothuli yimilinganiselo yokungcola ephepheni, ibonakaliswe ngenani leendawo zothuli kuluhlu oluthile kumgangatho wesikwere wendawo yephepha. Uthuli lwephepha luphezulu, iyinki yokuprinta, ichaphaza lokuphinda uvelise alikho kakuhle, amabala amdaka achaphazela ubuhle bemveliso.
Ngokwesiqhelo umphezulu wephepha lokubhala, iphepha lokutyabeka kunye nephepha lokupakisha lenziwa ngokulinganisa umaleko okhuselayo ngokuxhathisa kwamanzi. Uyifaka njani i-sizing, esetyenziswa ngokuqhelekileyo ipeni yedada efakwe kwi-inki ekhethekileyo kwimizuzwana embalwa, zoba umgca ephepheni, jonga ubuninzi bobubanzi bokungakhuli, ukunganyamezeleki, iyunithi mm. Ubungakanani bomphezulu wephepha buphezulu, ukuprinta kwe-inki yokuqaqamba kuphezulu, kuncinci ukusetyenziswa kweinki.
Kukukwazi kwephepha ukufunxa inki. Smoothness, sizing iphepha elilungileyo, ukufunxa i-inki kubuthathaka, umaleko we-inki owomileyo, kwaye kulula ukunamathela ukuprinta okungcolileyo. Ngokuchasene noko, ukufakwa kwe-inki kunamandla, ukushicilela kulula ukoma.
Ibhekisa kwicala lolungelelwaniso lombutho wephepha. Kwinkqubo yokwenza iphepha, ifayibha isebenza ecaleni kwicala longitudinal kumatshini wephepha. Inokuqatshelwa yiAngle ebukhali yamanqaku omnatha. Eme nkqo ukuya nkqo iyahamba. Ixabiso le-deformation yoshicilelo lwexesha elide lweenkozo zincinci. Kwinkqubo yokuprinta okuziinkozo ngephepha elinqamlezileyo, umahluko wokwanda mkhulu, kwaye ukuqina kunye nenqanaba leenyembezi zihluphekile.
10 Ixabiso lokuLandisa
Ibhekisa kwiphepha ekufunxweni kokufuma okanye ilahleko yokufuma emva kobungakanani umahluko. Ukuthamba kwethambo lefayibha ephepheni, ukuthoba kokuqina, kokukhona inyusa iphepha lokwanda; Kwelinye icala, isantya sokuhlisa esisezantsi. Ukongeza, ukugudileyo, ubungakanani bephepha elilungileyo, izinga lokunyusa lincinci. Njengephepha elinamacala amabini, iphepha leglasi kunye nephepha le-offset, njl.
Ngokubanzi, ukuceketheka nokungaxineki kwephepha, kokukhona kuya kuphefumla lula. Iyunithi yokukwazi ukuphefumla yi-ml / min (milliliter ngomzuzu) okanye s / 100ml (yesibini / 100ml), ebhekisa kubungakanani bomoya odluliswe ephepheni kwiminithi enye okanye ixesha elifunekayo lokudlula kwi-100ml yomoya. Iphepha elinokungena okukhulu komoya kuthambekele ekufunxeni iphepha kabini kwinkqubo yokuprinta.
Isidanga se-12 esimhlophe
Ibhekisa ekukhanyeni kwephepha, ukuba konke ukukhanya kubonakaliswe kwiphepha, iliso lenyama liyabona ukuba limhlophe. Ukugqitywa kobumhlophe bephepha, ngesiqhelo ubumhlophe be-magnesium oxide yi-100% njengomgangatho, thatha isampulu yephepha ngombane oluhlaza okwesibhakabhaka, ubumhlophe bokubonakalisa okuncinci kubi. Imitha emhlophe emhlophe yokwenziwa kweefoto ingasetyenziselwa ukulinganisa ubumhlophe. Iiyunithi zobumhlophe ziipesenti ezili-11. Iphepha elimhlophe mhlophe, i-inki yokuprinta ibonakala imnyama, kwaye kulula ukuyivelisa ngale meko.
13 Ngaphambili nangasemva
Ekwenzeni iphepha, umgubo ubunjwe kukuhluza kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngokubambelela kumnatha wentsimbi. Ngale ndlela, njengecala lomnatha ngenxa yokulahleka kweentsinga ezifanelekileyo kunye nokuzaliswa ngamanzi, ukushiya amanqaku omnatha, iphepha elingaphezulu liyajiya. Kwaye elinye icala ngaphandle komnatha licolile. Smooth, ukuze iphepha lenze umahluko phakathi kwala macala mabini, nangona imveliso yokomisa, ukukhanya koxinzelelo, kusekho umahluko phakathi kwala macala mabini. I-gloss yephepha yahlukile, echaphazela ngokuthe ngqo ukufunxwa kwe-inki kunye nomgangatho weemveliso zokuprinta. Ukuba inkqubo ye-letterpress isebenzisa ukushicilelwa kwephepha kunye necala elingasemva, i-plate wear iya kwandiswa kakhulu. Umphambili woxinzelelo lokushicilela iphepha ulula, ukusetyenziswa kwe-inki kuncinci.
Ixesha Post: Jul-07-2021